Barnaamijka caanka ah – Bogga 8 – Windows – Vessoft
WindowsBarnaamijka caanka ah – Bogga 8
Qalabka Soo-kabashada Xogta ee EaseUS – waa barnaamij software ah oo lagu soo ceshanayo xogta noocyada kala duwan. Software-ku wuxuu awood u leeyahay inuu soo cesho feylasha lumay ama aan la heli karin ee ka yimid aaladaha kala duwan iyo xambaaraha xogta.
Software ayaa si aad u eegto warbaahinta video internetka. Sidoo kale software awood u tahay in la abuuro aad channel u gaar ah si ay u gudbiyaan video ee shabakadda.
360 Isugeynta Amniga – istiraatiijiyad dhameystiran oo leh qalab badan oo dheeraad ah oo amniga lagu hagaajiyo waxqabadka kombiyuutarka shirkadda shirkadda Qihoo 360.
7-Zip – softiweerku wuxuu isku daraa feylasha wuxuuna adeegsadaa qaababka wax soo saar ee ugu wax soo saarka badan si loo gaaro natiijada ugu wanaagsan.
Movavi Screen Capture Studio – waa barnaamij kumbuyuutar oo aad shaashaddaada ka soo saarto oo aad sameyso shaashadda. Software-ka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si gaar ah u habaynto goobo badan oo shaashadda shaashadda ah ee loogu talagalay baahiyaha isticmaalaha.
Qalabka lagu hagaajinayo qaabka nidaamka iyo wax-ku-oolka ciyaarta. Kumbuyuutarku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku fuliso qaabka ugu fudud ee habka tooska ah ama habka loo isticmaalo.
Tani waa qalab lagu dayactirayo ciladaha jireed ee dariiqyada adag ama qamaarka. Software wuxuu bixiyaa habab kala duwan oo hawlgal ah wuxuuna bixiyaa natiijooyinka baaritaanka ee faahfaahsan.